Orinasa fitaovana fitsaboana | Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana fitsaboana any Sina
Manasa lamba fanosotra varavarana amin'ny tanana
Rapid-M-320 dia mpamaky lamba manadio varavarana ara-toekarena izay nanadihady sy novolavola araka ny takian'ny hopitaly na andrim-panjakana kely kokoa. Ny fiasa sy ny fanasana mandaitra dia mitovy amin'ny Rapid-A-520. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina fitaovana fandidiana, enta-mavesatra, fitoeram-panafody ary lovia, fanamafisam-peo fanatoranana ary fantsona mihombo ao amin'ny CSSD hopitaly na efitrano fandidiana.
Rafitra fanaraha-maso SHINVA ho an'ny vokatra fanasana Lumen
■ Fomba fanandramana ny vokatra fanasana
Ny fanasan-damba amin'ny pulsa dia tsy mitovy amin'ny fanasan-damba, izy io dia mampiasa ny fitsipiky ny asa vaovao hamahana ny karazan-java-maneno sarotra misy lalantsara, fitaovana ary lume kokoa. Mba hanamarinana ara-tsiansa bebe kokoa ny vokatra fanasan-damba, SHINVA dia manolotra ny vahaolana fanaraha-maso ny vokatry ny fanasan-damba arakaraka ny fiasa:
Ny velaran'ilay mpanasa lamba dia 1200mm monja izay manome fametrahana mora sy farany mampihena ny fandaniana sy ny fotoana fametrahana.
DXQ andian-dahatsoratra multifunction rakotra fanasana-disinfector dia natao manokana ho an'ny lager entana any amin'ny hopitaly toy ny fandriana marary, sarety sy ny fitoeran'entana sns fitoerany dia manana tombony amin'ny fahaiza-manao lehibe, fanadiovana tanteraka ary automatique avo lenta. Izy io dia afaka mamita ny fizotrany rehetra ao anatin'izany ny fanasana, fanasana, famonoana otrikaina, fanamainana sns.
DXQ series multifunction rack washer-disinfector dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fahasalamana na ny laboratoara biby hanasana sy hamonoana ireo zavatra mety ao anatin'izany ny karazana trolley, harona plastika, fitoeran-tsolika ary ny sarony, latabatra fandidiana sy kiraro fandidiana, tranom-biby laboratoara, etc.
Mpanadio ultrasonic mijoro maimaimpoana
Ny milina fanasan-damba ultrasound an'ny QX dia milina fanasan-damba lehibe ao amin'ny CSSD, efitrano fandidiana ary laboratoara.
Latabatra fanasan-damba ultrasonika ambony latabatra
Ilay mpanasa ultrasonic mini dia mampiasa signal oscillation matetika, izay alefan'ny mpamokatra ultrasonic, mivadika ho signal oscillation mekanika avo lenta ary miely amin'ny medium medium - vahaolana fanadiovana. Ny ultrasonic dia miparitaka mandroso ao amin'ny vahaolana fanadiovana mba hiteraka bubble kely an-tapitrisany. Ireo miboiboika ireo dia vokarina ao amin'ny faritra tsindry ratsy an'ny fampitana ultrasonika mitsivalana raha miditra haingana ao amin'ny faritra misy tsindry tsara. Ity dingana ity dia nantsoina hoe 'Cavitation'. Nandritra ny firongatry ny bubble, nipoitra ny tsindry ambony be avy eo ary misy fiantraikany amin'ireo lahatsoratra hanakorontana ny hadisoana naseho teo ambonin'ny sy ny elanelan'ny lahatsoratra hahatratra ny tanjona fanadiovana.
Mba hiantohana ny vokan'ny sterilization dia tena ilaina ny mitazona ny fanamainana foana. Ny kabinetra fanamainana ara-pahasalamana YGZ dia novolavolaina hihaona amin'ny filàna fanamainana tena ilaina amin'ny hopitaly. Ny vokatra dia tsara tarehy, feno amin'ny asany, tsotra amin'ny asany. Ampiasaina betsaka ao amin'ny CSSD hopitaly, efitrano fandidiana ary departemanta hafa izy ireo.
Kabinetra fitehirizana karazana mihantona
Endri-javatra vokatra an'ny Center-HGZ
■ efijery fanaraha-maso mikasika loko 5.7-inch.
■ Efitrano fananganana integral, madio madio tsy misy residu bakteria.
■ varavarana fitaratra milamina, mora jerena ny toe-javatra anatiny.
■ Smart hidin-trano electromagnetic hidin-trano, azo antoka sy azo antoka.
■ Rafitra fitehirizana rotary ho an'ny endoscope.
■ Rafitra vatofantsika efatra misy sosona, manodidina ny fiarovana ny endoscope.
■ Manazava jiro mangatsiaka LED, azo antoka sy azo antoka, tsy mamokatra hafanana.
Kabinetra fitahirizana karazana takelaka
Ny fanamainana sy ny fitehirizana ny endoscope dia zava-dehibe. ampahany amin'ny dingan'ny fanasan-damba sy famonoana otrikaretina endoscope, izay misy ifandraisany mivantana amin'ny endoscope sy ny fiarovana ny marary.